समाजसेवामा आनन्द - अन्य - नारी
भाद्र १४, २०७८ सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला संघकी अध्यक्ष सरिता कँडेल खनालको जन्म काभ्रेस्थित पनौतीमा भएको हो । सानै उमेरदेखि बुवा समाजसेवामा लागेको देखेकीले उनको झुकाव पनि यतै भएको हो । सरितालगायत १७ जनाको समूहले पछिल्लो समय विभिन्न ठाउँमा दुःखीहरुको सेवा र सहयोग गर्दै आएको छ ।
समाजसेवामा कसरी रुचि जाग्यो ?
बुवा पनि समाजसेवी भएकाले सानैदेखि त्यही वातावरणमा हुर्किएँ । धर्मकर्ममा पनि उत्तिकै रुचि थियो । समाजसेवा गर्दा मनमा एक किसिमको आनन्द प्राप्त हुन्छ । त्यसैले म यो क्षेत्रमा लागेकी हुँ ।
सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला संघले के–कस्ता काम गरेको छ ?
हामीले बाग्मती सफाइ अभियान (महिनामा एकपटक), प्राकृतिक विपद् (बाढी–पहिरो, जाडो लगायत) मा खाद्यान्न र लत्ताकपडा वितरण तथा मानव सेवा आश्रम र स्नेहा काख घरलाई डोनेसन दिएका छौं । अघिल्लो वर्ष नारी दिवसमा संघ तथा नेपाल एपीएफ अस्पतालको सहकार्यमा गाइनोकोलोजी क्यान्सर स्क्रिनिङ क्लिनिक सेवासुचारु गरिएको छ । यस्तै धेरै सहयोगको काम गरेका छौं ।
समाजसेवा गर्दा कस्तो महसुस हुन्छ ?
म शब्दमा त्यसलाई कसरी भनूँ । कसैको जीवनमा केही सहयोग गर्दा प्राप्त हुने खुसी र आनन्द अरू के होला र ?
छिट्टै के कुराले आकर्षित गर्छ ?
दुःखीहरूको दुःख–पीडा मलाई असह्य लाग्छ, उनीहरूको माया लाग्छ । उनीहरूको पीडामा थोरै भएपनि कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर सोच्छु ।
जीवन दुःख र सुखको संगम हो । जीवनमा उतारचढाव आइरहन्छन् । सुखमा मात्तिने र दुःखमा आत्तिने नगरी सहनशील भई अघि बढे वास्तविक जीवनको मज्जा लिन सकिन्छ ।
फुर्सदको समयमा के गर्न मन लाग्छ ?
श्रीमान्ले लेखेका गीत सुन्छु । म पनि कविता लेख्छु । टेलिभिजनमा समाचार हेर्छु । समाजसेवामा हात कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर सोच्छु ।
श्रीमान्सँग नाचेको टिकटक भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ नि ?
कत्ति कामको मात्र तनाव लिनु भनेर कहिलेकाहीँ रमाइलो गरेको हो ।
महिलाको महान् पर्व तीज नजिकिएको छ ? यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?
वर्षदिनमा आउने महिलाको चाड खुलेर रमाइलो गरी मनाउनुपर्छ । पहिले जस्तो धेरैजना जमघट भई रमाइलो गर्ने वातावरण भने अहिले छैन । तर, घरमै सीमित आफन्त जम्मा भई तडकभडकरहित साधारण तवरले मनाउँदै आफ्नो संस्कृति जोगाउनुपर्छ ।
पछिल्लो समय महिला असुरक्षाको घटना बढ्दो छ ? यसमा केही भन्नु छ कि ?
यो दुःखद् अवस्था हो । महिला असुरक्षाको घटना कम गर्न सरकारी तथा अन्य तवरबाट पहल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । महिलासम्बन्धी जनचेतना फैलाउनुपर्छ । यसैगरी, छोरीहरू पनि जसले जहाँ बोलायो त्यहाँ जानुहुँदैन । आफ्नो सुरक्षाका लागि आफैंले पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
एक दिनका लागि पुरुष हुनुभयो भने के गर्नुहुन्छ ?
मलाई महिला हुनु ठीक छ । तर पनि पुरुष भएको भए महिला हकहितका लागि नै राम्रा काम गर्थें ।
समाजसेवा गरिरहनेछु । यो क्षेत्रमा सदैव लागिपर्नेछु ।
भाद्र ६, २०७३ - नाचबाट आनन्द लिनहोस्